အရငျကလိုပဲ ထကျထကျမိုးဦးကို ကွျောငွာဘုရငျမကွီး ပွနျဖွဈစခေငျြတယျဆိုတဲ့ မြိုးမငျးစိုး – Askstyle
အရငျကလိုပဲ ထကျထကျမိုးဦးကို ကွျောငွာဘုရငျမကွီး ပွနျဖွဈစခေငျြတယျဆိုတဲ့ မြိုးမငျးစိုး
ပရိသတ်တို့ရေ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံး ဒီဇိုင်နာတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ သူကတော့ မြန်မာ့ထိပ်တန်းကြောငြာမင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ အင်မတန်မှရင်းနှီးသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာဗြူးတစ်ခုမှာတော့ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးက ယခုရက်ပိုင်း အွန်လိုင်းမှာ ထက်ထက်မိုးဦးဈေးရောင်းနေတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ မထက်ကို အရင်လိုမျိုး ကြော်ငြာဘုရင်မကြီး ပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တလောမှာတော့ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးက အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ပဲနဲ့ လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ကိုင်နေပြီး ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ မထက်ရဲ့ အရောင်းကြော်ငြာလေးတွေ ကြည့်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “အခုလိုပြောတာလေးတွေ အသံလေးတွေ အဲ့တာလေးတွေကျတော့ မထက်က ဘယ်သူနဲ့မှ မတူဘူးလေ…. သူ့ရဲ့ ပါရမီလို့ ခေါ်ရမှာပေါ့… သူ့အသံလေးမှာကိုက လူတစ်ဖက်သားကို ဂရုဏာသံလေး ပါသလိုမျိုး… အစ်ကိုတို့တွေဆို သူ့ကိုကြည့်ပြီး ချစ်လည်းချစ်တယ်… သူ့ရဲ့ Live မှာ စည်းမြောပြီးတော့ သူကပြောလည်းပြောတတ်တယ်… အစ်ကိုဆို သူ့ Live တွေ ပုံမှန်ကို ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဝေမျှလာပါတယ်။
ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုး ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ချိန်မှာ Facebook Live မှာ ဈေးရောင်းဖူးခဲ့ပြီး ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်မဟုတ်တော့ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။” အခက်အခဲဆိုတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ တစ်ဖက်က customer ဝယ်ချင်အောင်လည်း ကိုယ်က ပြောတတ်ရမယ်… ရတနာအကြောင်းကိုလည်း ဃဃနန သိထားရမယ် ပေါ့” လို့ ပြောခဲ့ပြီး ကိုယ်ကိုတိုင်က ရတနာအကြောင်းကို သေချာမသိပဲ ဖက်ရှင်အဝတ်အစားပိုင်းလောက်သာ သိတာဆိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်မရောင်းဖြစ်တော့ဘူးလို့ သူ့အတွေ့အကြုံလေးကို ပြောပြလာပါတယ်။
ရတနာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ် ဆိုတဲ့အချက်က မထက်ရဲ့ အားသာချက်ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီအတွက်ကြောင့်ရယ် သူ့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ် customer တွေက သူ့ကို ယုံကြည်ပြီး သူရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ၀ယ်ချင်လာတာလို့ မျိုးမင်းစိုးက မြင်ပါတယ်။
မထက်တစ်ယောက် မန္တလေးမှာနေတဲ့ ကာလတစ်လျှောက်လုံး မျိုးမင်းစိုးနဲ့ အရမ်းကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိခဲ့ပြီး မင်းသမီးနဲ့ဒီဇိုင်နာဆက်ဆံရေး ဆိုတာထက် မိတ်ဆွေရင်းချာ မောင်နှမနှစ်ဦးလို ရင်းနှီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မထက်က အနုပညာပိုင်းမှာအရမ်းကို စိတ်နှစ်ပြီးလုပ်တတ်တဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး Tik Tok ဆော့တာတောင်မှ တကယ့် ရှူတင်ကြီး တစ်ခုလို အဝတ်အစားတွေ မိတ်ကပ်တွေနဲ့ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာတောင် သေချာပြင်ဆင်ပြီးမှ ရိုက်တတ်တဲ့သူ လို့ ချီးကျူးထားပါတယ်။”မှတ်မှတ်ရရကတော့ အကိုတို့ အိမ်အပေါ်ထပ် ရေကူးကန်မှာ တက်ရိုက်ရင်းနဲ့ပဲ ရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျ မထက်ဆေးခန်းသွားပြလိုက်အုံးမယ်… ဗိုက်တွေအောင့်နေတယ် ဆိုပြီး နောက်ရက်ကျ သူဆေးရုံတက်လိုက်ရတာပေါ့နော်” ဆိုတဲ့ မှတ်မှတ်ရရ အဖြစ်အပျက်လေးကို အားတုံ့အားနာနဲ့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မထက်နဲ့ကတော့ မန္တလေးမှာတုန်းက ခဏခဏတွေ့ ဖြစ်ပေမယ့် အခုသူက ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ အခါ မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီကြားထဲအလုပ်ကိစ္စရှိရင်တော့ ဖုန်းဆက်လေ့ရှိပြီး အခုရက်ပိုင်း Live လွှင့်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတော့ သူနဲ့ အဆက်အသွယ် သိပ်မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။မထက်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြော်ငြာခေတ်ကို တကယ်ဦးဆောင်လာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်လို့ သူ့ရဲ့စန်းက ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ မျိုးမင်းစိုးက ချီးကျူးထားပါတယ်။ သူအောင်မြင်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူမှသူ့ကို မယှဉ်နှိုင်ခဲ့တာက မထက်ရဲ့ ထူးခြားချက်လို့ မျိုးမင်းစိုးက ဆိုလာပါတယ်။ ကျောက်မျက်ရတနာနဲ့ အင်မတန်မှ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်လို့ ဒီပစ္စည်းကိုရောင်းတဲ့အခါ ဒီလိုမျိုး ပြန်ပြီး ထိပ်ဆုံးရောက်လာတာဖြစ်မယ်လို့ မျိုးမင်းစိုးက မြင်ပါတယ်။
မထက်တစ်ယောက် အခုလို Live လွှင့်ပြီးဈေးရောင်းရင်း အောင်မြင်လာတဲ့အပေါ်မှာ အရမ်းဝမ်းသာပြီး သူ့ရဲ့ အသံနဲ့ အမူအရာကိုက ချစ်စရာကောင်းကောင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွက် အရင်လိုကြော်ငြာဘုရင်မကြီး ပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ မျိုးမင်းစိုးက သူ့ခံစားချက်ကို ပြောပြလာပါတယ်။
ပရိသတ်တို့ရေ တစ်ချိန်ကပြည်သူ့အချစ်တော် နာမည်ကျော်ကြော်ငြာမင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦးဟာဆိုရင် ကျောက်မြတ်ရတနာပစ္စည်းလေးတွေကို Facebook ကနေ Live လွှင့်ပြီး ရောင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက ဘောစိကိုကိုမမတို့လည်း “ရတနာရှိရာ ရတနာလာ” ဆိုသည့်အတိုင်း မထက်ရောင်းချနေတဲ့ရတနာပစ္စည်းလေးတွေကို ဝယ်ယူအားပေးကြပါအုံးလို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
ပရိသတျတို့ရေ ဒီဇိုငျနာမြိုးမငျးစိုးကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အကြျောကွားဆုံး ဒီဇိုငျနာတှထေဲက တဈယောကျပါ။ သူကတော့ မွနျမာ့ထိပျတနျးကွောငွာမငျးသမီးတဈဦးဖွဈခဲ့တဲ့ ထကျထကျမိုးဦးနဲ့ အငျမတနျမှရငျးနှီးသူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အငျတာဗွူးတဈခုမှာတော့ ဒီဇိုငျနာမြိုးမငျးစိုးက ယခုရကျပိုငျး အှနျလိုငျးမှာ ထကျထကျမိုးဦးဈေးရောငျးနတောနဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ မထကျကို အရငျလိုမြိုး ကွျောငွာဘုရငျမကွီး ပွနျဖွဈစခေငျြတယျလို့ ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျတလောမှာတော့ ဒီဇိုငျနာမြိုးမငျးစိုးက အိမျထဲကအိမျပွငျမထှကျပဲနဲ့ လုပျစရာရှိတာတှေ လုပျကိုငျနပွေီး ဒီရကျပိုငျးမှာတော့ မထကျရဲ့ အရောငျးကွျောငွာလေးတှေ ကွညျ့ဖွဈနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ “အခုလိုပွောတာလေးတှေ အသံလေးတှေ အဲ့တာလေးတှကေတြော့ မထကျက ဘယျသူနဲ့မှ မတူဘူးလေ…. သူ့ရဲ့ ပါရမီလို့ ချေါရမှာပေါ့… သူ့အသံလေးမှာကိုက လူတဈဖကျသားကို ဂရုဏာသံလေး ပါသလိုမြိုး… အဈကိုတို့တှဆေို သူ့ကိုကွညျ့ပွီး ခဈြလညျးခဈြတယျ… သူ့ရဲ့ Live မှာ စညျးမွောပွီးတော့ သူကပွောလညျးပွောတတျတယျ… အဈကိုဆို သူ့ Live တှေ ပုံမှနျကို ကွညျ့ဖွဈပါတယျ” လို့ ဝမြှေလာပါတယျ။
ဒီဇိုငျနာမြိုးမငျးစိုး ကိုယျတိုငျလညျး တဈခြိနျမှာ Facebook Live မှာ ဈေးရောငျးဖူးခဲ့ပွီး ကိုယျကြှမျးကငျြတဲ့ အလုပျမဟုတျတော့ အခကျအခဲတှေ ကွုံတှခေဲ့ရတယျလို့ ပွောပါတယျ။” အခကျအခဲဆိုတာ ဘယျလိုလဲဆိုတော့ တဈဖကျက customer ဝယျခငျြအောငျလညျး ကိုယျက ပွောတတျရမယျ… ရတနာအကွောငျးကိုလညျး ဃဃနန သိထားရမယျ ပေါ့” လို့ ပွောခဲ့ပွီး ကိုယျကိုတိုငျက ရတနာအကွောငျးကို သခြောမသိပဲ ဖကျရှငျအဝတျအစားပိုငျးလောကျသာ သိတာဆိုတော့ နောကျပိုငျးမှာ ဆကျမရောငျးဖွဈတော့ဘူးလို့ သူ့အတှအေ့ကွုံလေးကို ပွောပွလာပါတယျ။
ရတနာအကွောငျးကောငျးကောငျးသိတယျ ဆိုတဲ့အခကျြက မထကျရဲ့ အားသာခကျြဖွဈပွီးတော့ ဒီအတှကျကွောငျ့ရယျ သူ့ကိုခဈြတဲ့အတှကျကွောငျ့ရယျ customer တှကေ သူ့ကို ယုံကွညျပွီး သူရောငျးတဲ့ပစ်စညျးတှကေို ဝယျခငျြလာတာလို့ မြိုးမငျးစိုးက မွငျပါတယျ။
မထကျတဈယောကျ မန်တလေးမှာနတေဲ့ ကာလတဈလြှောကျလုံး မြိုးမငျးစိုးနဲ့ အရမျးကို ရငျးရငျးနှီးနှီး ရှိခဲ့ပွီး မငျးသမီးနဲ့ဒီဇိုငျနာဆကျဆံရေး ဆိုတာထကျ မိတျဆှရေငျးခြာ မောငျနှမနှဈဦးလို ရငျးနှီးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ မထကျက အနုပညာပိုငျးမှာအရမျးကို စိတျနှဈပွီးလုပျတတျတဲ့ သူတဈဦး ဖွဈပွီး Tik Tok ဆော့တာတောငျမှ တကယျ့ ရှူတငျကွီး တဈခုလို အဝတျအစားတှေ မိတျကပျတှနေဲ့ နမေကောငျးဖွဈနခြေိနျမှာတောငျ သခြောပွငျဆငျပွီးမှ ရိုကျတတျတဲ့သူ လို့ ခြီးကြူးထားပါတယျ။”မှတျမှတျရရကတော့ အကိုတို့ အိမျအပျေါထပျ ရကေူးကနျမှာ တကျရိုကျရငျးနဲ့ပဲ ရိုကျပွီးတဲ့အခါကြ မထကျဆေးခနျးသှားပွလိုကျအုံးမယျ… ဗိုကျတှအေောငျ့နတေယျ ဆိုပွီး နောကျရကျကြ သူဆေးရုံတကျလိုကျရတာပေါ့နျော” ဆိုတဲ့ မှတျမှတျရရ အဖွဈအပကျြလေးကို အားတုံ့အားနာနဲ့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
မထကျနဲ့ကတော့ မန်တလေးမှာတုနျးက ခဏခဏတှေ့ ဖွဈပမေယျ့ အခုသူက ရနျကုနျပွနျရောကျသှားတဲ့ အခါ မတှဖွေ့ဈတော့ဘူး လို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီကွားထဲအလုပျကိစ်စရှိရငျတော့ ဖုနျးဆကျလရှေိ့ပွီး အခုရကျပိုငျး Live လှငျ့တဲ့ကိစ်စတှရှေိနတေော့ သူနဲ့ အဆကျအသှယျ သိပျမရှိဘူးလို့ သိရပါတယျ။မထကျက မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ကွျောငွာခတျေကို တကယျဦးဆောငျလာခဲ့တဲ့ မငျးသမီးတဈယောကျ ဖွဈလို့ သူ့ရဲ့စနျးက ကွောကျဖို့ကောငျးတယျလို့ မြိုးမငျးစိုးက ခြီးကြူးထားပါတယျ။ သူအောငျမွငျနခေဲ့တဲ့အခြိနျမှာ ဘယျသူမှသူ့ကို မယှဉျနှိုငျခဲ့တာက မထကျရဲ့ ထူးခွားခကျြလို့ မြိုးမငျးစိုးက ဆိုလာပါတယျ။ ကြောကျမကျြရတနာနဲ့ အငျမတနျမှ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျတဲ့ သူတဈဦးဖွဈလို့ ဒီပစ်စညျးကိုရောငျးတဲ့အခါ ဒီလိုမြိုး ပွနျပွီး ထိပျဆုံးရောကျလာတာဖွဈမယျလို့ မြိုးမငျးစိုးက မွငျပါတယျ။
မထကျတဈယောကျ အခုလို Live လှငျ့ပွီးဈေးရောငျးရငျး အောငျမွငျလာတဲ့အပျေါမှာ အရမျးဝမျးသာပွီး သူ့ရဲ့ အသံနဲ့ အမူအရာကိုက ခဈြစရာကောငျးကောငျးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့အတှကျ အရငျလိုကွျောငွာဘုရငျမကွီး ပွနျဖွဈစခေငျြတယျလို့ မြိုးမငျးစိုးက သူ့ခံစားခကျြကို ပွောပွလာပါတယျ။
ပရိသတျတို့ရေ တဈခြိနျကပွညျသူ့အခဈြတျော နာမညျကြျောကွျောငွာမငျးသမီး ထကျထကျမိုးဦးဟာဆိုရငျ ကြောကျမွတျရတနာပစ်စညျးလေးတှကေို Facebook ကနေ Live လှငျ့ပွီး ရောငျးပေးနတောဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးတှထေဲက ဘောစိကိုကိုမမတို့လညျး “ရတနာရှိရာ ရတနာလာ” ဆိုသညျ့အတိုငျး မထကျရောငျးခနြတေဲ့ရတနာပစ်စညျးလေးတှကေို ဝယျယူအားပေးကွပါအုံးလို့ တိုကျတှနျးနှိုးဆျောလိုကျရပါတယျ။